PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-10 - Umengameli olandelayo angenzi okwenziwe nguzuma
Umengameli olandelayo angenzi okwenziwe nguzuma
Ilanga langeSonto - 2017-09-10 - Izindaba - Yisemkhulu Nzimande EPORT SHEPSTONE
MHLELI, singabantu baseningizimu Afrika ngethemba ukuthi kuningi esesikubonile sakufunda mayelana nokuthi indlu yakithi emnyama iliphathe kanjani izwe okokuqala ngqa.
Thina bantu abamnyama sibe nazo futhi sinenazo izinselelelo eziningi mayelana nokuphatha izwe.
Ukuphatha kukamengameli wokuqala wentando yeningi ubaba unelson Mandela, akuzange kufane nokukababa uthabo Mbheki. Ukuphatha kukababa uthabo Mbheki kungeke kufane nokuphatha kukababa ujacob Zuma ( osesithombeni). Inselelo ke isisele kumengameli ozalandela ngemuva kukamengameli Zuma. Engikufisayo ngomengameli ozolandela yilokhu:
Ukuthanda izwe lakhe ngaphambi kokuthanda iqembu lakhe.
Buka nje umengameli Zuma uke watshela izwe ukuthi yena uthanda iqembu lakhe kunezwe. Kulungile ukuthanda iqembu lakho kunezwe kodwa kungaphimiseleki kuziwe zinkumbi zabantu.
Lokho kubonakala ngokuthi inkohlakalo ithi uma yenzeka kungacatshangelwa isithunzi sezwe, kodwa kunalokho kucatshangelwane neqembu.
Phela iqembu licatshangelwa ngoba akumele lilahlekelwe ngabavoti noma abalandeli. Mayelana nesithunzi sezwe esilimalayo lokho akuthi nda.
Mayelana nomengameli wezwe olandelalyo kumele athande zonke izakhamizi ngokufanayo.
Kungathi uma kukhona inhlese yokucwasa eshiwo ngomunye wohlanga oluhlukile, bese yena umengameli kube nguye ochela uphethiloli. Ngalokho angisho ukuthi makangaphawuli noma ewuhlabe inhlali. Leyo ngane yakhe ephazamile kume eyisondeze eduze khona ezokwakha ubumbano ezinhlangeni ezahlukene. Mayelana nomengameli olandelayo kumele kube ngumengameli ozobeka izidingo zezakhamizi phambiki kunezakhe.
Hhayi umengameli ozothola ithuba lokuxebula umkhoma, ozosiza yena nezingane zakhe ngokunjalo kanye nabo labo asondelene nabo.
Mayelana nomengameli olandelayo kumele kube ngumongameli ongezokudayisa ngezwe ngokuba abanjwe abantu bohlanga oluthize, khona kuzozuza bona kanye naye umengameli wezwe ngoba lokho kulimaza isithunzi sezwe ngokunjalo.
Mayelana nomengameli olandelayo kumele engatshali ongqongqoshe ngoba kungabangani bakhe eminyangweni kwabona abangayazi, kushiywe ngemuva abantu abanamakhono.isibonelo njena kusho ukuthini ukuthatha umuntu ongakaze abe iphoyisa umenze ungqongqoshe wamaphoyisa?
Ekubeni bakhona osigaxamabhande abeneminyaka engamashumi amathathu kweve, abawazi kahle umsebenzi wamaphoyisa ku- nokusukela nomuntu ngoba engukhomredi. Mayelana nomongameli olandelayo kumele abe ngumuntu oyo-lwa nenkohlakalo. Okungakhathalekile ukuthi yenziwe ngungqongqoshe amkhonzile namthandayo.
Mayelana nomengameli olandelayo kumele kube ngumengameli oyolalela izimvo zezakhamizi uma zithi makaphume esikhundleni ngezizathu ezibekiwe amane ephume engagolozi, njengoba kwenza umongameli umbheki owathobela umthetho waphuma wangambiwa ngamapiki nemigxala.
Mayelana nomengameli ozolandela kumele kube ngumongameli ozohola izwe ngobuqotho, njengokuthi angancengani nezikhulu zakhe ngoba nakhu zamsekele ngesikhathi esakhankasa.
Ngakho kumele noma zikhwabanisa noma zenza izenzo ezimbi amane njena anyamazelele ngisho izwe likhala ngesikhulu esithize. Mayelana nomengameli ozolande- la kumele kube ngumengameli njalo okuzothi ngisho abasekeli bakhe bengahloniphi, ekwazi ukuthi ebakhalime bengadlebeleki hhayi indaba yokuthi ebabekezelele ngoba nakhu wabekwa yibona.
Mayelana nomengameli ozolandela kumele kube ngumengameli ozkwakha ubudlelwane obuyinqanawe ngisho namaqembu aphikisayo imbala, hhayi kuphela ephalamende kuphela ngisho nengaphandle.
Mayelana nomengameli ozolandela kumele kube ngumengameli oyokwenza esikhulu isiqiniseko ukuthi umthetho ezweni uyawuqinisa kwizakhamizi, ngisho nakuyena imbala uma ewuphula.
Kumele kube ngumongameli ozochibiyela kabusha umthethosisekelo ngoba lona okhona unamaphutha amaningi.